ရီ Loughlin သူမကသူ၏သမီးချွေးသိပ်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့သလဲ - ကလူ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "ရီ Loughlin သူမကသူ၏သမီးချွေးသိပ်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့သလဲ - ကလူ
ရီ Loughlin သူမကသူ၏သမီးချွေးသိပ်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့သလဲ - ကလူ
ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ရီ Loughlin နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Mossimo Giannulli, ဟောင်းကြယ်ပွင့် "အပြည့်အဝအိမ်," တက္ကသိုလ်များအတွက်ကျယ်ပြန့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအရှုပ်တော်ပုံမှာသူတို့ကိုဆန့်ကျင်လေးနက်စွဲချက်ရရှိသောသူကိုဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများမှလိုက်လျောဖို့မဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ, နှစ်ပေါင်းထောင်။
ရီ Loughlin တက္ကသိုလ်များသို့တက်ရောက်ရန်၏အရှုပ်တော်ပုံဖုံးလွှမ်းနေတာကိုစွဲချက်ဖြေဆိုရန်တရားရုံးတွင်ပေါ်ထွန်းပြီးနောက်3ဧပြီလအမေရိကန်တရားရုံးယောဟန်သည်ယောသပ်ကို Moakley ထွက်ခွာမည်။ (ပေါလု Marotta / Getty Images အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ)
တနင်္လာနေ့ စုံတွဲသော်လည်းမလွန်ကျူးတောင်းပန် ဘော်စတွန်အတွက်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်းကသူတို့ကိစ္စစောဒကတက်တဲ့သူ Felicity Huffman နှင့် 13 သည်အခြားချမ်းသာကြွယ်ဝမိဘများနှင့်မတူဘဲ ] နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်မှရှောင်ရှားရန်,
အစီရင်ခံစာများအဆိုအရ Loughlin နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း, ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအနည်းဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအဆင့်မှာ, ဒီဥပဒေရေးရာမဟာဗျူဟာရွေးကောက်တော်မူပြီ။
ပထမဦးဆုံးအ Loughlin နှင့် Giannulli သူတို့ "မရှေးခယျြမှု" ခဲ့ပေမယ့် Loughlin ပြီးနောက်သော်လည်းမလွန်ကျူးအသနားခံပြောခဲ့ဖြစ်ပါသည် , "ငြင်းဆန်ခဲ့သည်" ကနဦးအသနားခံသဘောတူညီချက်ပယ်ကြပြီ သူမက "override" နှင့်ထောင်ဒဏ်ကိုရှောင်ရှား, သတင်းရင်းမြစ်အီးကပြောပါတယ်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစား! သတင်းများ။ အဆိုပါစုံတွဲသည်သင်္ဘောသားအားကစားသမားအဖြစ်တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှမှသူတို့သမီးကိုတုပဖို့လာဘ်စပျစ်ရည်ကိုအတွက် 500 000 ဒေါ်လာပေးဆောင်ဘဲလျက်စွပ်စွဲနေပါတယ်။
USC အလွန်ရွေးချယ်ဝန်ခံချက်မှုနှုန်း 13% ပါတယ်။ ထိုစွဲချက်၏ထောက်ခံမှုအတွက်တင်သွင်းကျမ်းကျိန်လွှာ, မ Olivia ကျောက်စိမ်း, 19 နှစ်မဟုတ်သလို Isabella, 20 နှစ်ပေါင်းအဆိုအရ, Los Angeles မှာသူတို့ရဲ့ကျောင်းသားကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းကိုများအတွက်န်ထမ်းအသင်းအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ရှိသည်ဖို့လူသိများခဲ့ကြသည် အားကစားအတွက်ပါဝင်ခဲ့။
Loughlin, 54 နှစ်ပေါင်း Giannulli, 55 နှစ်အစား "ဟုအန်စာတုံးကိုလှိမ့်" ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အရင်းအမြစ်နောက်ဆုံးမှာအသီးအသီးနှငျ့ပတျသကျသောလိမ်လည်မှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုစွဲချက်ပိုပြီးလေးနက်စွဲချက်ချမှတ်ခံရသောပြည်သူ့မဂ္ဂဇင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည် နောက်ဆုံးအနှစ်လေးဆယ်ကျော်အစီရင်ခံစာများအရသိရသည်သို့မဟုတ်စုစုပေါင်း - 20 နှစ်ပေါင်းထောင်ဒဏ်အများဆုံးဝါကျ။
"ဒါကမကောင်းတဲ့အလောင်းအစားဖြစ်နိုင်သည်" ဟုအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "အခုကသူတို့အခွအေနေအရင်ကထက်ပိုဆိုးသည်။ "
"ငါသည်သူမနှင့်သူမ၏ရှေ့နေများကအဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုများ၏လှုံ့ဆော်မှုလျှော့တွက်ခဲ့ကြထင်ပါတယ်" ဟုအခြားအရင်းအမြစ်ကဆက်ပြောသည် လူတွေ ။ "ဒါကြောင့်သူမငြင်းခုန်ဘူး, ပြီးတော့သူတို့အခြားတာဝန်ခံ hit" နှင့်မဆိုသဘောတူညီချက်ဖျက်သိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီတော့သူတို့ကလုပ်ဖို့ကျန်ကြွင်းစေပြီတစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုသော်လည်းမလွန်ကျူးအသနားခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
သို့သော် Loughlin နှင့် Giannulli သူတို့ရွေးချယ်စရာမရှိဘူးထင်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်ရှိစေခြင်းငှါပေမယ့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ခုခံကာကွယ်ဖို့ယုံကြည်: Loughlin သည်မိမိအပြစ်ရှိကြောင်းအသနားခံ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သည်။ သူတို့သမီးထိုသို့ပြုမယ်လို့ "ဖြစ်ကောင်းဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူးတဲ့သူ" ဟုအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါတယ် လူတွေ .
အဆိုပါအရင်းအမြစ် Loughlin ကျောက်စိမ်း Olivia နှင့် Isabella Giannulli လျော့နည်းထင်မရိုသေသောပြည်သူ့ပြောသည်
Loughlin သည်သူ၏သမီးနှစ်ယောက်နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကအရှုပ်တော်ပုံ၏သတင်းအိမ်တွေကိုသွားပြီးကျောက်စိမ်း Olivia Giannulli left သောအခါမကြာသေးမီကသည်အထိ, သူမကလူမှုရေးကွန်ရက်များနှင့် YouTube ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုကြောင့်တုန်လှုပ်သည်ဟုဆိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ Olivia ကျောက်စိမ်းသူမသည်တက္ကသိုလ်များအတွက်အကျိုးစီးပွားသူမ၏မရှိခြင်းဖော်ပြထားသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်သွားရာအတွက်အရှုပ်တော်ပုံရှေ့တော်၌, ရုပ်ရှင်ဘလော့ဂ်ထုတ်ဝေခဲ့ကွောငျးသင်ယူပြီးနောက်အရှုပ်တော်ပုံအားဖြင့်လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရသည်။ Olivia ကျောက်စိမ်းသည်သူ၏အနာဂတ် "ပျက်စီး" ဘဲလျက်အဘို့သူမ၏မိဘများကအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်။
"ဟုတ်ကဲ့, (ရီ) သည်အများပြည်သူအမြင်စဉ်းစားနိုင်ပေမယ့်သူ၏သမီးသူမ၏စဉ်းစားသောအရာကိုနှိုင်းယှဉ်ဘာမျှမရဲ့" ဟုအဆိုပါအရင်းအမြစ်ပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "ဒါဟာသဘာဝလျော့နည်းထောက်ခံမှဦးဆောင်သည်ဟုတစ်ခုခုဖြစ်၏။ "
Isabella Giannulli, ရီ Loughlin နှင့် Olivia Giannulli Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ 2017 13 2017 သြဂုတ်လအပေါ် Galen ရေးစင်တာမှာဆယ်ကျော်သက်ရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ (Frazer Harrison / Getty Images အားဖြင့်ဓာတ်ပုံ)
သောအမှုဖြစ်လျှင်, Loughlin သူမကစွပ်စွဲတရားမဝင်ထက်လိုစွပ်စွဲခံရပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုလုပ်ဖို့တာဝန်ယူလျှင်သူ၏သမီးသူမ၏၏လျော့နည်းထင်ပိုစိုးရိမ်ပုံရသည်။
တစ်ဦးကဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Loughlin နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းသည်အခြားမိဘများအဖြစ်အစားအသနားခံ-bargain ၏စွဲချက်ဆန့်ကျင်ခုခံကာကွယ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့တတိယအကြောင်းပြချက်ကပြောပါတယ်။ နှင့်အင်တာဗျူးတွင် Los Angeles Times က ကာကွယ်ရေးရှေ့နေ Lara Yeretsian, မိဘအချို့ဆန့်ကျင်တရားစွဲမှုဖြစ်ကောင်းလူတွေ Slam-dunk ဖြစ်ယူဆသောသူတို့ကိုမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုသည်။
ဤသည်မှာကာကွယ်ရေးသူသားသမီးတို့အဘို့ပြုပါရန်အသုံးပြုကြောင်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများအမျိုးမျိုးသောပရိယာယ်နှင့်ဆက်စပ်သောမျိုးစုံရေတွက်ဖို့အပြစ်ရှိကြောင်းတဲ့သူက William "က Rick" ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်အဆိုတော်ဝန်ခံချက်အတိုင်ပင်ခံအာရုံစိုက်မယ်လို့ ပိုပြီးကံကောင်း။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များမှာမိဘများယူဆ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးအဆိုတော်နှင့်သူ၏စွပ်စွဲချက်အစီအစဉ်များ၏လေ့လာသိရှိခဲ့ပွီးနောကျ, သူအပြစ်ရှိကြောင်းတရားတွေ့တော်မူခြင်းနှင့်မိဘများအပါအဝင်ကသူ၏စွပ်စွဲချက်ကြံရာပါ, ဆန့်ကျင် incriminating သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းရန် FBI ကနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ မတ်လအတွက်တင်သွင်းမူရင်းပြစ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်ထောက်ခံမှုအတွက် 204 စာမျက်နှာကျမ်းကျိန်လွှာ၏ထုတ်ပြန်ချက်များအရ, အာဏာပိုင်များအဆိုတော်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတျတမျးတငျထားနှင့်အန္တရာယ်မရှိဘူးလို့ခံယူထားတယ်စာရွက်စာတမ်းများကိုစလှေတျခဲ့ကွောငျးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အက်ဖ်ဘီအိုင်၏ညှနျကွားမှအီးမေးလ်များ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဆိုတော်နှင့်အတူအဆက်အသွယ် Loughlin နှင့် Mossimo Giannulli, အ ploy ၎င်းတို့၏စွပ်စွဲချက်အခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်သည့်အပေါ်စွဲချက်တင်မှာဖော်ပြထားတဲ့။
စုံတွဲအဆိုတော်နှင့်အတူဆွေးနွေးချက်တွေ၎င်းတို့၏အစည်းအဝေးအပြီးတွင် 2016 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကျမ်းကျိန်လွှာအတူ။
အဆိုတော်စုံတွဲကိုပြောသည်ပြီးမှသူတို့ရဲ့သမီးကြီးများ၏ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများဖြစ်ကြောင်း "USC ဝန်ခံ၏ခါနီးတွင်," ဟုအဆိုပါသုံး USC မှာ Donna အကြီးတန်းတွဲဘက်အားကစားဒါရိုက်တာလာဘ်ထိုးဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျမ်းကျိန်လွှာသည်နှင့်အညီ, ထိုအစီအစဉ်အတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သူ Heinel ။ Heinel သင်္ဘောသားအသင်းအားကစားကလေးစစ်သားတအဖြစ် Isabella Giannulli ကိုသတ်မှတ်ပါ။
Loughlin နှင့် Mossimo Giannulli Olivia ကျောက်စိမ်း Heinel တစ် coxswain အဖြစ်တင်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုမယ်လို့ပုံကိုပြသလိမ့်မည်ဟုသောလိမ်လည်မှု 2017 Olivia ကျောက်စိမ်း, အဆိုတော်ပေးစုံတွဲမေးမြန်းခြင်း "အရေးယူဆောင်ရွက်မှုရိုက်ချက်" ထပ်ခါတလဲလဲပါပြီ
ကျောက်စိမ်း Olivia Giannulli နိုဝင်ဘာလ 2017 အတွက် USC မှာလက်ခံမှု၏စာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးမှ, သူ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကျောင်းတစ်တိုင်ပင်နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်များ Giannulli တက္ကသိုလ်၏ဝန်ခံချက်စိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သင်္ဘောသားအဖွဲ့ဝင်များက။
Heinel ထို့နောက်အဆိုတော်သူတို့၏ကျောင်းများ၎င်းတို့၏မှားယွင်းသောအရာရှိတဦးကအားကစား profile များကိုရှင်းပြဖို့သူတို့သားသမီးဦးဆောင်လမ်းပြဖို့ဘယ်လိုပေါ် Loughlin Mossimo Giannulli နှင့်အခြားမိဘများထံသို့ကူးသွားအကြံပေးခဲ့သည်။
Loughlin ပြည်သူ့အီးတို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အရင်းအမြစ်အရသိရသည်ကောင်းတစ်ဦးမိဘထောက်ခံမှုအဖြစ် USC မှသူ၏သမီးကိုရောက်စေဖို့ယခုအထိလုပ်ဖို့လိုအပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ Loughlin နှင့် Giannulli ယှဉ်ပြိုင်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးစတုတ္ထအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါသည်: Loughlin သူမနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်းကယ့်ကိုအမှားတစ်ခုခုပြုမိပါပြီယုံကြည်ပါဘူး, အရင်းအမြစ်ပြည်သူ့သို့ပြောသည်။
"ဒါဟာကိုယ့်သူမကလုပ်ဖို့ထင်ခဲ့ရာနားလည်ရန်အနည်းငယ်အချိန်တရားမဝင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြာ" ဟုအဆိုပါသတင်းရပ်ကွက်ကပြည်သူ့သို့ပြောသည်။ "သူမ၏အဘို့ကပြောင်အပြုအမူမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကလက်ျာနှင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ရှိသလော ဒီတစ်ခါလည်း။ သို့သော်သူမပညတ်တရား၏ချိုးဖောက်မှုကိုမမွငျခဲ့သညျ။
"သူမကသူတို့နည်းလမ်းများရှိခဲ့ပါလျှင်မည်သည့်မိခင်ပွုပါပွီမဟုတ်ကြောင်းဘာမျှမလုပ်ခဲ့ခံစားခဲ့ရသောကွောငျ့အစအဦး မှစ. သူမဈေးကွက်ကိုလက်မခံချင်ကြဘူး" ဟုအဆိုပါအရင်းအမြစ်ကဆက်ပြောသည် ။
ပြည်သူ့: "ER", ထိုသရုပ်ဆောင်များကို 25 နှစ်ကြာပြီးနောက်: ဘယ်လိုသူတို့စီးရီး၏ပစ်လွှတ်ကတည်းကပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီလော
ပြည်သူ့: Kim Kardashian ကရှေ့နေဖြစ်ဖို့ခုံတန်းရှည်ပေါ်ပြန်လာ